शरीर डिटोक्सिफिकेशन भनेको के हो? What is body detoxification?
Learn with teyung Kumar
BecomeaDXN Distributor
Homehealth knowledge dxnशरीर डिटोक्सिफिकेशन भनेको के हो? What is body detoxification?
Teyungkumar Saturday, October 17, 2020
शरीर डिटोक्सिफिकेशन भनेको के हो?
अहिलेसम्म तपाईले शरीर डिटोक्सिफिकेसनको बारेमा सुन्नुभएको छ किनकि यो प्रचलनमा छ, विशेष गरी सेलिब्रेटीहरूको साथ। तपाईंले कोलोन सफा गर्ने विचारको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ र यो कसरी काम गर्दछ ?जब तपाईं पहिलो पटक शरीर डिटॉक्सिफिकेसनको बारेमा सुन्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो दिमागमा छविहरू छुट्नुहुन्छ जुन अप्रिय छ। एकचोटि तपाईंले शरीर डिटोक्सिफिकेसन र यसले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नुभयो भने, तपाईंसँग फरक राय हुन्छ।
शरीर डिटॉक्सिफिकेसनले तपाईंको पाचन प्रणाली सफा गर्नमा केन्द्रित गर्दछ, सामान्यतया तपाईंको आंतहरू खाली गर्न र तपाईंको पाचन प्रणालीको अ ्गहरूलाई बढावा दिनको लागि बनाइएको समाधान पिएर। यद्यपि यो शल्यक्रिया जस्तो लाग्न सक्छ, बडी डिटोक्सिफिकेशनमा मात्र पिउने कुरा हुन्छ र त्यसपछि बाथरूममा जान्छ। त्यो सबै प्रक्रियामा छ। यसले तपाईंको पाचन प्रणाली स्वस्थ छ भनेर निश्चित गर्न काम गर्दछ।
जब तपाईंको पाचन प्रणाली राम्रो कार्य क्रममा छ, तपाईंको सम्पूर्ण शरीरले गाउँदछ। यदि तपाईंको पाचन प्रणाली स्वस्थ छैन, भने तपाईंको सम्पूर्ण शरीरले पीडित छ। स्वस्थ शरीर पाउनको लागि तपाईसँग स्वस्थ पाचन प्रणाली हुनै पर्छ।
तर तपाईको पाचन प्रणाली तपाईको शरीरमा लिने सम्पूर्ण विषाक्त पदार्थको लागि समात्छ। यदि तपाईं एक स्वस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ जो धूम्रपान गर्दैन, पिउँदैन र केवल जैविक खाद्य पदार्थ मात्र खाँदछ, तपाईं अझै विषाक्त पदार्थहरू लिदै हुनुहुन्छ। तिनीहरू हावामा छन् जुन तपाईंको सास छ, पानी तपाईंले पिउनुहुन्छ र ... राम्रोसँग, जताततै। यी विषहरू शरीरमा सुस्त रहन्छन् र पाचन प्रणालीको लागि उनीहरूको बाटो पत्ता लगाउँदछन् - एउटा महत्त्वपूर्ण प्रणाली जुन तपाईं राम्रो स्वास्थ्य कायम गर्न आवश्यक छ।
पाचन प्रणाली कलेजो, अग्न्याशय, मिर्गौला र आन्द्रा जस्ता अंगहरु मिलेर बनेको छ। खाना सामान्यतया पेट मार्फत पाचन प्रणालीमा प्रवेश गर्छन् र त्यसपछि पाचन पथको माध्यमबाट प्रशोधनको लागि पास गरिन्छ। केहि खाद्य पदार्थ र पेय जुन तपाईं लिनुहुन्छ किडनी र पनक्रियाले प्रशोधनमा ओभरटाइम काम गर्दछ। पाचन प्रणालीमा सबै अ ्गहरूले गर्नुपर्ने काम भनेको तपाईंको शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि। एकचोटि प्रणालीमा खाना र पेय पदार्थ प्रशोधन गरेपछि, यो फोहोरद्वारा हटाइन्छ। तरल पदार्थहरू मूत्रले मिल्छ र ठोस फोहोर आन्द्रा मार्फत मलको रूपमा हटाइन्छ।
केहि अवस्थाहरूमा, खानाहरू आंतहरूमा फस्न सक्दछन्। त्यहाँ केहि मामलाहरू छन् जहाँ व्यक्तिहरू 10 वर्ष सम्म आफ्नो आन्द्रामा तत्वहरू छन्! थप रूपमा, अंगहरू पनि पिट्दछन् जब यो विषाक्त पदार्थहरूको साथसाथै केही खाद्य पदार्थहरू हटाउनको लागि आउँदछ जब यी अंगहरू प्रशोधन गर्न गाह्रो हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, साधारण कार्बोहाइड्रेट्स मिर्गौला र पन्क्रियाज साथै कलेजोमा कडा हुन्छन् किनकि ती द्रुत रूपमा छिर्दछन् र यी अंगहरूलाई ओभरटाइम गर्न काम गर्दछन्।
हावामा विषाक्त पदार्थहरू जुन तपाईंले सास लिनुभयो रक्त प्रणालीको माध्यमबाट प्रणालीमा प्रवेश गर्दछ जुन अ ्गहरूमा रगत ल्याउँदछ। जब तपाईं धुम्रपान गर्नुहुन्छ, उदाहरणको लागि, धुवाँ तपाईंको रक्त प्रवाहमा अवशोषित हुन्छ र तपाईंको शरीरभरि नै बोक्दछ। यसले नकारात्मक पाचन प्रणालीलाई असर गर्छ। दोस्रो हात धुवाँ पनि यसको टोल लिन्छ।
तपाईको छाला तपाईको सबैभन्दा ठूलो अ is्ग हो र जब तपाई स्नान वा नुहाउने क्रममा केमिकलहरू प्रयोग गर्दै शैम्पू र साबुनमा चित्रित हुन्छन्, तपाइँ आफ्नो छालामा विषाक्त पदार्थहरू अवशोषित गर्दै हुनुहुन्छ। जब तपाईं हावामा सास फेर्नुहुन्छ, तपाईं विषालु पदार्थहरू तपाईंको फोक्सोमा लिनुहुन्छ। तपाईंको जीवन विषमुक्त बाँच्न असम्भव छ, जबकि धेरै व्यक्तिहरूले प्रयास गर्छन्। तपाईं अन्ततः बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ र हावामा भएका कीटाणुहरू लिनुहुन्छ। यो अपरिहार्य छ कि तपाईं विषाक्त पदार्थहरूको सम्पर्कमा आउनुहुनेछ जबसम्म तपाईं प्लास्टिकको बुलबुले तपाईंको जीवन बिताउने निर्णय गर्नुहुन्न।
शरीर डिटोक्सिफिकेसनले पाचन प्रणालीमा बस्ने सबै विषाक्त पदार्थ र खाद्यहरूको शरीर खाली गर्दछ। न केवल यो एक राम्रो तरिका हो आफ्नो शरीर बाहिर बाट बाहिर निकाल्न को लागी, तर यो पनि राम्रो काम गर्दछ जब यो वजन कम गर्न आउँछ। धेरै व्यक्तिहरु लाई लाग्यो कि तिनीहरु केवल शरीर को डिटोक्सिफिकेसन को उपयोग गरेर केहि पाउन्ड को लागी लिन सक्छन्।
पिउने बडी डिटॉक्सिफिकेसन फ्ल्युड एउटा बेरियम एनिमा लिनको समान छ, बाहेक तपाईंले धेरै पिउनु पर्दैन र यसको स्वाद धेरै राम्रो हुन्छ। एक बेरियम एनिमा पूर्ण रूपमा तपाईको आन्द्रा खाली गर्दछ र सामान्यतया ती व्यक्तिलाई दिइन्छ जसले उनीहरूको बृहदान्त्र वा अन्य पाचन अंगहरूमा परीक्षण गरिरहेछन्। यसले शरीरबाट सबै फोहोर हटाउँछ र तपाईंलाई हल्का महसुस गराउँदछ। यो केवल विषबाट छुटकारा पाउन सक्दैन, तर यसले तपाईंको आंतहरूमा सुस्त भएको कुनै पनि फोहोरबाट छुटकारा पाउन सक्छ।
शरीर डिटोक्सिफिकेशन सूत्र पिउने स्वस्थ हुनको लागि पहिलो चरणहरू मध्ये एक हो। तपाईंले उचित सावधानीहरू पनि लिनुपर्दछ जब यो तपाईंको स्वास्थ्यको लागि आउँदछ र सही खाना, व्यायाम र खराब बानीबाट बच्नुहोस्। शरीर डिटॉक्सिफिकेशन तपाईको स्वास्थ्यलाई बृद्धि गर्ने, तपाईको तौल घटाउन र तपाईको पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्नको रूपमा देख्न सकिन्छ। राम्रो शरीर डिटोक्सिफिकेसनले तपाईंको शरीरमा पौष्टिक पोषणहरू भर्नेछ ताकि तपाईं अभाव हुन सक्नुहुन्छ ताकि तपाईं स्वस्थ रहन पनि सक्नुहुन्छ।
यस पुस्तकले तपाईंलाई घर मा शरीर डिटोक्सिफिकेसन र फिट र स्वस्थ रहन को यस तरिका को बारे मा तपाईंलाई के जान्नु पर्छ के बारे मा सबै सिकाउँछ। तपाईं शरीर डिटोक्सिफिकेसनका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ, कसले शरीर सफा गर्नुपर्छ र कसरी घरैमा तपाईंको आफ्नै शरीर डिटोक्सिफिकेशन उपचार कसरी गर्ने भन्ने बारे पनि। यदि तपाईं वजन कम गर्ने तरिका खोज्दै हुनुहुन्छ भने, स्वस्थ रहनुहोस् र तपाईंको पाचन प्रणालीलाई ठीक क्रममा राख्नुहोस्, तपाईं यसलाई शरीर डिटोक्सिफिकेशनमा लागी पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ।
कसलाई शरीर डिटोक्सिफिकेशन आवश्यक छ?
पहिले नै भनिएझैं कसैले पनि शरीर डिटोक्सिफिकेसन प्रयोग गर्न सक्दछन्। कति पटक तपाईं शरीर डिटोक्सिफिकेसन सामग्री प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईंको जीवनशैली र तपाईंको शरीर डिटोक्सिफिकेशनको लागि आशयमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं वजन कम गर्न चाहानुहुन्छ भने, जीवनशैलीमा नराम्रो बानीहरू समावेश छ, जस्तै धूम्रपान, तपाईं शरीर डिटोक्सिफिकेशन अधिक पटक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं राम्रो पाचन स्वास्थ्य कायम गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं कम अक्सर शरीर डिटक्सिफिकेसन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाई स्वस्थ रहनको लागि यस बाटोमा यात्रा गर्न प्राय जसो निर्णय गर्नुहुन्छ, सबैजनालाई एक पटकमा शरीरको डिटोक्सिफिकेशन चाहिन्छ।
वजन घटाउन को लागी
यदि तपाईं वजन कम गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं बडि डिटोक्सिफिकेशन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंको शरीरको फोहोरलाई हटाउनेछ र तपाईंले धेरै हल्का महसुस गर्नुहुनेछ। धेरै व्यक्ति जो शरीरको डिटोक्सिफिकेशनका लागि वजन कम गर्न एक तरीका खोज्दै छन्। शरीर डिटोक्सिफिकेशन तौल गुमाउने एक स्वास्थ्यकर उपायहरू मध्ये एक हो।
किनभने तपाईं आफ्नो आंतहरूमा फोहोर भण्डार गर्न रुचाउनुहुन्छ, तपाईं फुलेको महसुस र अन्त वजन कायम गर्न सक्नुहुनेछ।, शरीर डिटॉक्सिफिकेशनले तपाईंको शरीरबाट फोहोर हटाउँछ र तुरुन्तै हल्का महसुस गराउँदछ। त्यो भनिएको छ, शरीर डिटॉक्सिफिकेशन एक रेचक छैन। तपाईको प्रणालीबाट फोहोर हटाउन यो एक प्राकृतिक तरीका हो जुन वजन घटाउँदछ।
Toxins को आफूलाई छुटकारा गर्न
धेरै सेलिब्रेटीहरूले शरीरको डिटोक्सिफिकेसन प्रयोग गरिरहेका छन् आफैलाई विषाक्त पदार्थबाट मुक्त गर्नका लागि जुन तिनीहरू नियमित आधारमा आत्मसात् गर्दछन्। तपाईं शरीर सफा प्रणाली प्रयोग गरेर विषाक्त पदार्थबाट तपाईंको शरीरलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंको शरीरलाई सफा र जहरबाट मुक्त राख्नको लागि कार्य गर्दछ जुन तपाईं उपभोगमा साथ साथै तपाईं सास फेर्नुहुन्छ। यदि तपाईं धुम्रपान गर्नुहुन्छ, पिउनुहुन्छ वा जहिले पनि स्वस्थ आहार लिनुहुन्न भने, तपाईं स्वस्थ रहन र शरीरलाई विषाक्त पदार्थहरूबाट जोगाउनको लागि शरीर डिटॉक्सिफिकेशन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जबकि शरीर डिटोक्सिफिकेशन राम्रो स्वास्थ्य अभ्यासको लागि विकल्प हुनुहुन्न, यसले विषाक्त पदार्थहरू लिएर आउने समस्याहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
सबैको बारेमा विषाक्त पदार्थको सम्पर्कमा आउँदछ। शरीर डिटॉक्सिफिकेशन प्रयोग गरेर विषको शरीरबाट छुटकारा पाचन प्रणालीको लागि मात्र राम्रो छैन, तर समग्र स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हो।
पाचन प्रणाली स्वस्थ राख्दै
याद गर्नुहोस्, तपाईंको पाचन प्रणाली र यसको स्वास्थ्य तपाईंको शरीरको समग्र स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण छ। कोलोन क्यान्सर, जुन सानो आन्द्राको क्यान्सर हो । कोलन क्यान्सर कोलनमा पोलिप्सको परिणाम हो। यी polyps कोलोनमा अवशिष्ट कचौराको कारण प्रायः परिणामहरू हुन्छन्। शरीर डिटॉक्सिफिकेसन शरीरमा फोहोर हटाउँछ र कोलन सफा राख्छ। यसको शीर्षमा, धेरै शरीर डिटोक्सिफिकेशन सूत्रहरूमा जडिबुटी, भिटामिन र खनिजहरू हुन्छन् जसले शरीरलाई पाचन प्रणालीलाई डिटोक्सिफाइ गर्न मद्दत गर्दछ र अ ्गहरू पोषण दिन्छ कि यसलाई सफा राख्न आवश्यक छ। धेरै व्यक्तिहरूले स्वस्थ पाचन प्रणाली कायम राख्न एक तरीकाको रूपमा शरीर डिटोक्सिफिकेसन प्रयोग गर्छन्।
प्राकृतिक शरीर डिटोक्सिफिकेशन आपूर्तिको साथ, शरीरलाई पोषक तत्वहरूको एक श्रृंखला खुवाइन्छ जुन न केवल पाचन प्रणालीलाई मद्दत गर्दछ, तर शरीरको बाँकी भागमा pani मद्दत गर्दछ, । पाचन अंगहरूले शरीर र मुटु, मस्तिष्क र अन्य महत्त्वपूर्ण अंगहरूमा पोषक तत्त्वहरू पठाउँछन्। शरीर डिटॉक्सिफिकेसनले पाचन अंगहरूको माध्यमले सम्पूर्ण शरीरलाई सफा गर्छ।
औषधि परीक्षण पास गर्दै
कामका लागि लागु लागूपदार्थ लिनेहरू प्रायः घरबाट शरीर डिटोक्सिफिकेसन प्रयोग गर्छन् शरीरबाट अवैध पदार्थको अवशेष हटाउन, जस्तै मारिजुआना। जबकि शरीर डिटोक्सिफिकेसनले औषधि रगत परीक्षणको साथ सहयोग गर्दैन, यसले कसैलाई अवैध पदार्थ वा सुर्तीजन्यको लागि पनि एक मूत्र परीक्षण पास गर्न मद्दत गर्दछ। जो सप्ताहन्तमा इम्बीबिन्स गर्छ उसले शरीर डिटॉक्सिफिकेसन प्रयोग गरेर सोमबार एक औषधि परीक्षण पार गर्न सक्छ।
यो सिफारिश गरिएको छैन कि तपाईं शरीर डिटोक्सिफिकेसनलाई ड्रग्स प्रयोग गर्ने तरिकाको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ र लागूपदार्थ परीक्षण पास गर्दछ, यसले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ । तपाईं शरीर डिटॉक्सिफिकेशन औषधि परीक्षण पास गर्नका लागि गरिन्छ।
बजारमा शरीरका विभिन्न डिटोक्सिफिकेशन उत्पादनहरू छन्। ती मध्ये धेरै राम्रो स्वास्थ्य कायम गर्न को लागी बनाइएको हो। अरूहरू शरीरबाट विषाक्त पदार्थहरू सफा गर्न वा तौल घटाउने तरिकाको रूपमा ध्यान दिन्छन्। राम्रो स्वास्थ्य कायम राख्नका साथै वजन कम गर्न चाहने जो कोहीले शरीर डिटॉक्सिफिकेशन समाधान र बजारमा बेच्ने ट्याब्लेटबाट फाइदा लिन सक्दछन्।
जब तपाईं घरमा शरीर डिटोक्सिफिकेशन हुनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो शरीर सफा गर्न प्राकृतिक सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर आफ्नै समाधानहरू पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यस website ma , हामी घरेलु उपचारहरू बारे छलफल गर्नेछौं, तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने र कसरी तपाईंलाई होम बडी डिटोक्सिफिकेशन सूत्रमा आफ्नै बनाउनको लागि केही विधिहरू पनि दिन्छौं।
जबकि सबैले घरमा शरीर डिटोक्सिफिकेसन प्रयोग गरेर फाइदा लिन सक्दछन्, स्वास्थ्यको सवालमा यसलाई कहिले पनि सामान्य ज्ञानको विकल्पको रूपमा लिनु हुँदैन। जबकि शरीर डिटोक्सिफिकेशनले तपाईंलाई तौल घटाउन, शरीरलाई विषाक्त पदार्थहरूबाट मुक्त गर्न, तपाईंको बृहदान्त्र सफा राख्न र तपाईंलाई औषधि परीक्षण पास गर्न मद्दत गर्दछ, स्वस्थ रहन उत्तम उत्तम तरिका भनेको विष, ड्रग्स र गलत खाना खाएर टाढा रहनु हो। घरको शरीर डिटोक्सिफिकेशनमा प्राकृतिक पनि पछि अध्यायमा छलफल हुनेछ।
Save 80.0% on select products from UNBRUVO with promo code 80UQ4SNW, through 10/23 while supplies last.
Choose Acer Swift3with AMD Ryzen Processing Power
Save 53% on select product(s) with promo code 537QF1J9 on Amazon.com
DXN - Vitamins, Minerals & Supplements / Diet
DXN product (13)
Health Knowledge (10)
Computer/IT knowledge (6)
Education Knowledge (4)
English Knowledge (3)
Health knowledge. (3)
health knowledge dxn (1)
Home Made Remedies For The Skin-छालाको लागि घरेलु उपचार
शरीर डिटोक्सिफिकेशनका लागि उपयुक्त घरेलु उपायहरु
SOME PRODUCTS FOR BODY DETOXIFICATION.
How can you activate the dxn css login for the first time? तपाईं पहिलो पटक dxn CSS लगईन कसरी सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ?
How to Become DXN Distributor ??DXN ग्लोबल सदस्य बन्नुहोस् र कहीं पनि सन्तुष्ट DXN वितरक र सदस्यहरूको अंश बन्नुहोस्
Dxn for health ,wealth and happiness.Visit this site for accurate,authentic online knowledge related to education,IT,computer,online earning,DXN,DXN product,MLM,direct selling and so on.Our responsibility is to provide authentic and quality knowledge.
Copyright (c) 2020 teyungkumar-dxngyan All Right Reserved
Crafted with by teyungkumar | Distributed by Gooyaabi Templates